भारतकी चेली नेपालकी बुहारी : एक राष्ट्रवादी, अर्की राष्ट्र वि'रोधी ! - Sidha News
भारतकी चेली नेपालकी बुहारी : एक राष्ट्रवादी, अर्की राष्ट्र वि’रोधी !
काठमाडौं। मुलुकमा अहिले को राष्ट्रवादी भन्ने बहसले चर्चा पाइरहेको छ । भारतले नेपालमा सीमा मिचेर सडक बनाएरै उद्घाटन गरेपछि यसबारेमा संसदमा समेत बहस भइरहेको छ । सन् १९६२ देखि लिम्यिाधुरा क्षेत्रमा भारतीय फौज क्याम्प बनाएर बस्दै आएको छ । तर, यसबारे गणतन्त्र आएको १२ वर्षपछि सांसदहरुले जोड लगाएर बोलिरहेका छन् । सडकमा उत्तिकै नारा लागिरहेको छ।
सन् २०१५ मे मा चीनसँग भएको सहमतिअनुसार गत नोभेम्बर २ भारतले लिम्पिाधुरा कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा जारी गर्नेदेखि गत मे ८ मा लिपुलेक क्षेत्र भएर मानसरोवर जाने बनाएको बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालमा वि’रोध सुरु भएको हो । नेपालले पनि गत मे २० मा उक्त क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ।
यी घट’नाक्रमसँगै नेतादेखि कार्यकर्तासम्म, प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म राष्ट्रवादी छवि बनाउन लागिपरेका छन् । नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नेक्रममा कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा नगरेको अभिव्यक्ति दिएकी सांसद सरिता गिरी विवा’दमा परेकी छन् । सडकदेखि सदनसम्ममा उनको वि’रोध भइरहेको छ।
उनी भारतकी चेली र नेपालकी बुहारी हुन् । उनको अभिव्यक्तिलाई छायाँमा पार्ने गरी उनी भारतीय चेली भएको र भारतकै पक्षमा बोलेको भन्दै आलो’चना भइरहेको छ । यसको उनले लगातार ख’ण्डन गरिरहेकी छन्।
एक भारतीय चेलीको वि’रोध भइरहँदा अर्की भारतीय चेलीको वाही वाही भइरहेको छ । सांसद सरिता गिरीको वि’रोध भइरहँदा टिकटकमा नेपाली गीतमा नाचेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अर्की भारतीय चेली तथा नेपालकी पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको नेपाल देश प्रेम भावनाले ओतप्रोत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा वाही वाही भइरहेको छ।
हिमानी कोषमार्फत समाजसेवामा लागिरहेकी हिमानी सबैकी प्रिय छिन् । उनको सौन्दर्यता र समाजसेवालाई लिएर चर्चा हुने गरेको छ । राजतन्त्र अन्त्य नभएको भए उनी नेपालको महारानी हुने थिइन् । सांसद सरिता गिरी र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी दुवैले नेपाली नागरिकता लिएका छन् र उनीहरु नेपाली नागरिक भएका छन्।